🥇 ▷ Qalabka la Weydiiyo - Su'aalaha iyo Jawaabaha ✅
Qalabka la Weydiiyo – Su’aalaha iyo Jawaabaha
Tabaha La weydiiyay, waxaad u baahan tahay oo dhan inaad ogaato si aad u hesho jawaabo sax ah, inkasta oo keydka macluumaadka uu leeyahay wax kabadan 90,000 su’aalo.
Su’aal iyo jawaab
Haddii aad gasho raadinta jawaabta su’aasha, Suuragal maaha in sidan oo kale lagu helo. Waxaa jira xog uruurinta in kabadan 90,000 oo su’aalo iyo jawaabo oo maalin walba koraya oo la cusbooneysiiyay. Marka, xitaa haddii aad qabtid 90,000 su’aalood iyo jawaabo lagu cusbooneysiiyay keydka macluumaadka, suurtagal kuguma ahan inaad jawaabta hesho waqtiga aad u baahan tahay inaad ka jawaabto. Laakiin ku kalsoonow, tani waxay ku saabsan tahay Khaa’imiinta, waana kaa caawin doonaa.
Waxaad ogaan doontaa in ka hooseysa jawaabaha suurta galka ah, waxaad leedahay seddex ikhtiyaar:
Qarax: Waa 480 qadaadiic ah wuxuuna baabi’inayaa labo jawaabo = 50% waa sax
Labalaab: Qiimaha waa 240 qalin oo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka jawaabto laba jeer = 50% sax
Jawaabta saxda ah: Ma aha iib, laakiin sax 100%
Marka halkan waa hagaha, bal aan sharaxno sida loo helo qadaadiic dheeri ah oo lagu iibsado bambaanooyin iyo labo jibaar. Oo waxaan kuu sharixi doonaa sida loo helo Jawaabta saxda ah. In kasta oo marka hore xoogaa xeelado ah:
Agabyada la Dalbaday – Ha u isticmaalin Bamamka
Bamku wuxuu labalaabmay qadaadiic laba jibaar, iyo itimaalka garaacistu waa isku mid inkasta oo 4 jawaabood oo Shiinaha kuu jawaabayaa.
Laakiin miyaad ogeyd in mid ka mid ah 4-ta jawaabood uusan sax aheyn, itimaalka aad u leedahay inaad hesho jawaabta saxda ah waa 50% illaa 66.66%. Oo waxaad ku bixin doontaa lacagta qadarta ah kala badh
Marka khiyaanada ugu horeysa waa: Had iyo jeer isticmaal Doubles, marna Bambaano
Tambooyinka la Weydiiyay – Qadaadiic
Ciyaarta ma heli kartid jawaab sax ah, laakiin waxaad heleysaa qadaadiic. Waxaan kaloo ku heshiinney in lacagta qaddarka ah lagu isticmaali karo Doubles. Sidaa darteed, waxaad heli doontaa lacag qaddar:
Triviaton: Tani waa habka ugu fudud ee lagu kasbado qadaadiic iyadoo aan wax kale la isticmaalin, xuduudo kuma lahan nolosha, waadna joogi kartaa ilaa iyo inta aad rabto
Howlgalka: Daawadaan oo firfircooni kahor intaysan bilaabin ciyaarta, maadaama ay bixiyaan hadiyado wanaagsan isla markaana ay dhammaystiraan cayaaraha kale
Badbaadin: Tani waa ciyaar ciyaar aad u qosol badan oo abaal marin wanaagsan leh. Si kastaba ha noqotee, waxaad heli kartaa Jawaabta saxda ah, maadaama aan gadaal ka sharixi doonno. Marka waa inaad ku ciyaartaa qaab cayaareedkan haa ama maya.
Su’aalaha Maalinlaha ah: Abaal marintu waa mid aan kala sooc lahayn, lagama yaabo inaad taaban kartid lacagta qadaadiicda ah, laakiin waa bilaash, markaa hareeraha ka ciyaar.
Daaweyn: Ciyaar kaliya haddii aadan haysan wax kale, maadaama tani ay tahay habka lacagta ugu adag sameynta ciyaarta
Ciyaaraha Classic: Guul kasta waxaad kasbataa lacag
Booska (Koobka): Dhamaan qaababka ciyaarta ee hore waxay ku siinayaan dhibco heerar, iyo dhamaadka usbuuca, iyadoo kuxiran heerkaaga darajooyinka, waxaad heli doontaa abaalmarino ka sii fiican ama kaba xun. Tusaale ahaan, waxaan ku guuleysanay usbuucii hore (horyaalka ugu hooseeya) waxayna na siiyeen 7,500 qadaadiic, 5 jawaabood oo sax ah iyo 400 dhibcood
Qalabka la Weydiiyo – Jawaabta saxda ah
Waxaan hore u sheegnay in Jawaabta Saxda ah aan la samayn karin. In kasta oo aan gebi ahaanba run ahayn, maadaama ay xor noqon karaan, laakiin tiro ahaan
Triviaton: Jawaab sax ah kama bixin, laakiin waxay muhiim u tahay marxaladda
Howlgalka: Jawaab sax ah kama bixin, laakiin waxay muhiim u tahay marxaladda
Badbaadin: Haddii aad ka mid tahay 20ka sare, dhamaadka usbuuca, waxaad heli doontaa jawaabta saxda ah
Su’aalaha Maalinlaha ah: 2 ka mid ah 6 hadiyadaha ayaa ah jawaabta saxda ah.
Daaweyn: Iyada oo laabta ugu dambeysa aad ka heli karto jawaabta saxda ah, laakiin ma fududa in aad halkaas tagto.
Ciyaaraha Classic: Jawaab sax ah kama bixin, laakiin waxay muhiim u tahay marxaladda
Booska (Koobka): Haddii aad ku jirto meel wanaagsan, waxaad heli doontaa jawaabta saxda ah
Su’aal la khiyaaneeyey – Dhibco
Sidoo kale amaahda ayaa loo qaadan karaa
Triviaton: Aaminaad bixin, laakiin tirinta
Howlgalka: Aaminaad bixin, laakiin tirinta
Badbaadin: Haddii aad ku jirtid 20ka ugu sareeya, dhamaadka usbuuca, waxaad heli doontaa dhibco
Su’aalaha Maalinlaha ah: 2 ka mid ah 6 abaalmarinood waa amaah
Daaweyn: Iyada oo laabta ugu dambeysa aad ku heli karto dhibco, laakiin ma fududa in aad halkaas tagto.
Booska (Koobka): Hadaad sifiican u kala soocdo, waxaad heli doontaa dhibco
Fiidiyowga iyo Nolosha
Haddii aad leedahay ikhtiyaar, waxaad daawanaysaa fiidyow xayeysiis ah ka hor inta aadan ciyaarin, waxaad lahaan doontaa bam bilaash ah ama laba jibbaar ah. Markaa ka faa’iidayso
Noloshu waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku celiso kadib su’aalaha fashilmay. Waxaad ku noolaan kartaa nolol su’aalaha Su’aalaha Maalinlaha ah, ama waxaad iska sugtaa uun inay koraan kaligood.
WoW Classic: fasalka ugu wanaagsan ee taangiga lagu isticmaalo godka iyo baararka